Masinina fanasana ara-tontolo iainana sy tolo-kevitra hanaja ny tontolo iainana | Fanavaozana maintso
Daniel Palomino | | Mitsitsy angovo, General, Tontolo_iainana, Teknolojia vaovao
Ny milina fanasan-damba, ilay fitaovana ampiasainay hanasana lamba miteraka fiatraikany lehibe eo amin'ny tontolo iainana Ary na dia misy tolo-kevitra vitsivitsy aza ny OCU (Fikambanan'ny mpanjifa sy ny mpampiasa) dia tsy izany daholo.
Ity fitaovana ity dia manana fanjifana miovaova, midika izany fa mihinana amin'izay hosasany sy iray amin'ireo tolo-kevitry ny OCU dia ny hameno feno ny amponga fanasan-damba ho manatratra fihenam-bidy lehibe amin'ny vidin'ny rano sy ny herinaratra, 2 amin'ireo antony telo manakiana amin'ny milina fanasan-damba.
Ny tolo-kevitr'izy ireo dia amin'ny fotoana fividianana izay tokony hikajiantsika ny fahafaha-mavesatra farany ambony sy ny kilasy elektrika na ny fahombiazan'ny angovo.
La fahaiza-manao ambony indrindra azo fintina toy izao:
Ho an'ny ankohonana lehibe (olona mihoatra ny 4): Masinina fanasan-damba manana hazakazaka hatramin'ny 9 kg.
Fianakaviana antonony: (olona 4): Masinina fanasan-damba manana hazakazaka hatramin'ny 8 kg.
Ho an'ny olona 2 na 3: milina fanasan-damba hatramin'ny enina 7 kg.
Manomboka amin'ny olona 1 ka hatramin'ny 2: Masinina fanasan-damba miaraka amin'ny enta-mavesatra hatramin'ny 6 kg.
Ary ny momba ny kilasy elektrika (Azo antoka fa hihaino anao izany) dia ny fanamarihana ireo fitaovana elektrika ampiasain'ny mpampiasa eran'i Eoropa ary avy any amin'ny tena mahomby indrindra:
Ary fanjifana be:
Ao amin'ny tranokala OCU dia azonao atao ny mahafantatra momba ireo milina fanasan-damba izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ary mampitaha azy ireo arakaraka ireo toetra ireo ary mazava ho azy ny vidiny. tsindrio eto hijery ny mpampitaha OCU.
Saingy tsy mijanona eto ilay zavatra, iray amin'ireo antony voalaza izay mahatonga misy fiantraikany lehibe amin'ny tontolo iainana ny fihinanana rano, be loatra, isaky ny misasa.
Ny milina fanasan-damba mahazatra dia afaka mandany manodidina Rano 200 litatra ho an'ny entana feno.
Ho fanampin'izay, misy karazana milina fanasan-damba 2, ireo izay manana enta-mavesatra ambony ary ireo izay manana enta-mavesatra, ny voalohany dia ny mpanasa lamba mandany rano betsaka indrindra, raha ity farany kosa dia mety handany 7 sy 38 litatra isaky ny 91 kg ny enta-mavesatra.
1 Masinina fanasan-jaza
1.1 "Kandidà" ho an'ny milina fanasan-jaza
1.1.1 Karazana milina fanasan-jaza
1.1.1.1 Amin'ny tsena Espaniôla
1.1.1.1.3 Rivotra Aqua-Steam
1.2 Masinina fanasana ekolojika tanteraka
1.2.1 Drumi sy GiraDora
1.2.2 Bicilavadora sy ny milina fanasan-dàlana amin'ny bisikileta (ny dikan-teny sarotra amin'ny voalohany).
1.2.3 Hula Washer. Masinina fanasana amin'ny hoop hula
1.2.4 Manasa. Masinina fanasan-damba
1.2.5 Washit. Fandroana sy milina fanasan-damba miaraka amin'izay
1.2.6 Masinina fanasana kodiarana rano
1.2.7 Dolfi, manasa lamba amin'ny alàlan'ny fitarafana
2 Detergent, ny antony fahatelo manakiana amin'ny fanasan-damba
Ny milina fanasan-tena "ekolojika" dia tsy araka ny noeritreretinao azy ireo, milina fanasan-damba mahazatra sy ankehitriny izay mandany herinaratra sy rano antsasaky na latsaka satria "ecof Friendly".
Ho ahy manokana, misy ireo milina fanasan-damba mahazatra izay azo raisina ho ekolojika sy ireo "ekolojika".
Amin'izao aloha dia mandeha amin'ireo voalohany izahay, ireo izay heverina ho ekolojika.
"Kandidà" ho an'ny milina fanasan-jaza
Ny milina fanasan-damba dia heverina ho ekolojika satria mahafeno andian-torolàlana, na amin'ny asany na amin'ny fanamboarana azy.
Voalohany indrindra dia izay Tokony handany rano mihoatra ny 15 litatra isaky ny akanjo ianao. Ity fanasan-damba ity dia takatra amin'ny tsingerina lava (ho an'ny landihazo) ary misy rano mafana.
Amin'ny tsingerin'ny fanasan-damba, ny tahiryo angovo dia tokony ho 0.23 KW / h ary koa ho an'ny akanjo kilao rehetra.
Ary farany, ny fitaovana nanamboarana ny milina fanasan-damba dia tsy maintsy jerena satria misy bioplastika azo ampiasaina amin'ny fanamboarana azy.
Amin'izany fomba izany dia mihena ny famoahana CO2 ankoatry ny fiantraikany tontolo iainana tena ambany satria fitaovana azo ovaina io.
Etsy ankilany, raha mila mividy milina fanasan-damba na fitaovana hafa isika, amin'ny maha-mpanjifa azy, dia tsy maintsy jerentsika izany ny mari-pamantarana angovo, izay nolazaiko teo aloha.
Tsy hampahafantatra antsika ny fahombiazan'ny angovo ao amin'ny fitaovana io, fa hanome antsika ny hery maneno koa, na eo amin'ny sehatry ny fanasana na amin'ny dingana fihodinana, hisorohana ny fandotoana amin'ny tabataba sy ny tarainan'ny mpifanila vodirindrina sasany.
Karazana milina fanasan-jaza
Amin'izao fotoana izao dia mbola miaraka amin'ilay heverina ho milina fanasan-jaza aho ary ao anatin'ity kilasin'ny milina fanasan-damba ity dia afaka mahita marika sy maodely isan-karazany isika.
Ohatra, isika dia afaka mahita milina fanasan-damba izay tsy mila rano amin'ny fiasan'izy ireo toy ny LG sasany.
Efa nandefa vokatra toa ny LG Styler, fitafiana mitafy vy miaraka amin'izay mamela antsika hanala ny fofona ratsy saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nandeha nandroso i LG ary nanolotra ity milina fanasan-damba ity, izay ankoatry ny fanesorana ny fofona akanjo no hanadio izany ho antsika.
Tsy vaovao velively ny famolavolana ary mifototra amin'ny hevitry ny mpianatra sasany avy amin'ny National University of Córdoba, any Argentina.
Ireo mpianatra ireo dia namorona ny Modely Nimbus, izay miasa miaraka amin'ny voajanahary CO2 sy detergent biodegradable.
Maharitra 30 minitra ny tsingerin'ny fanasan-damba ary ny dioksidan'ny karbaona ampiasain'ny masinina dia averimberina hatrany hatrany ao anatin'ny masinina.
Taorin'io dingana io ihany, LG dia nanamboatra milina fanasanany manokana, na dia tsy eo an-tsena amin'izao fotoana izao aza izy io dia ao anatin'ny fotoana fohy.
Etsy ankilany, efa amidy any Angletera sy any Etazonia, dia hitantsika ilay milina fanasan-doha Xeros. Ity milina fanasan-damba ity dia mahay manasa ny akanjontsika amin'ny rano mihoatra ny vera iray.
Mba hahatratrarana izany dia makà sasany plastika plastika izay atsofoka ao anaty milina fanasan-damba, miaraka amin'ny vera misy rano ary rehefa kosehina amin'ny lamba izy ireo noho ny fihetsiky ny amponga dia afaka manadio ny loto sy manala ireo tasy izy ireo.
Ireo baolina ireo, mitovy amin'ny voam-bary amin'ny habeny azo ampiasaina hatramin'ny in-100 ary ny masinina dia manana fitaovana manangona azy ireo amin'ny faran'ny tsingerin'ny fanasana tsirairay. Ankoatr'izay dia tsy misy poizina izy ireo ary tsy miteraka karazana allergy.
Efa andrana am-pahombiazana ao amin'ny faritry ny hotely Hyatt izy ireo.
Amin'ny tsena Espaniôla
Any Espana isika dia afaka mahita milina fanasan-damba toa ny Samsung Ecobubble, ny Hotpoint, Aqualtis na ny maodely Whirlpool Aqua-Steam.
Ity milina fanasan-damba ity dia ampitahaina amin'ny marika iray hafa nefa kosa maodely hafa, tsy mahazo vokatra tsara kokoa na amin'ny angovo na amin'ny fahombiazan'ny fanasana araka ny fanadihadiana nataon'ny OCU.
Ireo maodely ireo dia manana rafitra fahombiazan'ny angovo A ++ ankoatry ny fahombiazana tsara.
Toy izany koa, izy ireo dia amboarina amin'ny plastika voaverina izay namboarina avy amin'ny vata fampangatsiahana taloha sy ny milina fanasan-damba, mampihena be ny gazy CO2 amin'ny fanamboarany.
Raha ny tena manokana dia natombok'izy ireo ny maodely 6769 mampanantena fitehirizana rano 35% ambony indrindra ankoatra ny fahombiazan'ny angovo A ++.
Masinina fanasana ekolojika tanteraka
Ankehitriny dia hasehoko anao ireo milina fanasan-damba izay ekolojika kokoa ary ho fantatrareo ny anton'ny fanavahana ahy eo amin'ny iray sy ny iray hafa.
Drumi sy GiraDora
Ny GiraDora dia prototype an'ny mpanasa lamba sy ny fanamainana avy amin'ny mpianatra sasany any Peroa ary natao mba hipetrahan'ny olona eo amboniny sy hanasana sy hanamaina ny akanjony amin'ny famadihana pedal.
Milina fanasan-damba GiraDora
Ity milina fanasan-tarehy ekolojika ity dia ny sarin'ny Drumi, izay natomboka teny an-tsena ary "sophisticated" kokoa nefa miaraka amin'ny fampisehoana mitovy.
Izy ireo dia afaka manasa fitafiana 6 na 7 mandany rano manodidina ny 5 litatra.
Samy manana tombony lehibe toy ny fanatanjahan-tena, fitsitsiana angovo ary mazava ho azy, ny fihenan'ny dian-tongan'ny karbonina.
Milina fanasana Drumi
Bicilavadora sy ny milina fanasan-dàlana amin'ny bisikileta (ny dikan-teny sarotra amin'ny voalohany).
Manana tombony lehibe ny biciladora any ambanivohitra izay mbola manasa lamba ny tanana. Ny bisikileta dia ampiasaina ahafahana mamindra ny ampongan'ny milina fanasan-dàlana tsy misy herinaratra.
Etsy ankilany, ny Masinina fanasan-dàlana amin'ny bisikileta dia mitovy amin'ilay teo aloha saingy miaraka amin'ny fahasamihafana fa kanto kokoa izy io ary misy vidiny avo kokoa na dia manana fiasa mitovy amin'ilay teo aloha aza izy io.
Namboarin'ny mpianatra sinoa avy ao amin'ny University of Nationalities Dalian.
Masinina fanasana bisikileta
Hula Washer. Masinina fanasana amin'ny hoop hula
Ity milina fanasana prototype ity dia noforonin'ireo injenieran'ny Electrolux. Ity milina fanasan-damba ity dia misy hula hoop izay mampiala voly antsika ary mitazona antsika ho maotina raha mbola manasa ny lambantsika isika.
Tsy mandany herinaratra izy io, manararaotra ny angovo omentsika ny fihetsiky ny vatantsika ny fanasana.
Ampidiro fotsiny ny detergent ary manomboka mihodina!
Avy eo isika dia manana ireo izay maniry ny hampiasa betsaka ny tahirin'ny rano amin'ny alàlan'ny fampidirana rafitra fanodinana toy ny:
Manasa. Masinina fanasan-damba
Prototype hybrid eo amin'ny milina fanasan-damba sy trano fidiovana hahatratrarana ny rano tsy lanintsika.
Ny asany dia mifototra amin'ny fampifandraisana ny fivoahan'ny rano amin'ny milina fanasan-damba amin'ny fidiran'ny rano amin'ny trano fidiovana, mba hahafahan'ny rano rehetra very maina ankehitriny rehefa manasa, dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanosehana ilay rojo.
Washit. Fandroana sy milina fanasan-damba miaraka amin'izay
Prototype sy milina fanasan-damba miaraka amin'izay. Ny endriny dia hamela antsika hampiasa indray ny rano mandro hanasana lamba.
Ary farany, ny fahasamihafana mazava amin'ny fanasana lamba amin'ny lamaody taloha na amin'ny fanavaozana ny tenanao.
Masinina fanasana kodiarana rano
Ny famolavolana azy dia mifototra amin'ny kodiarana rano nentim-paharazana ary novolavolain'ny teknisianina avy amin'ny Oniversite sinoa Jiao Tong mba hitondra fanasana maharitra ho an'ny vondrom-piarahamonina izay mbola tsy misy herinaratra ao aminy.
Dolfi, manasa lamba amin'ny alàlan'ny fitarafana
Araka ny voalazan'ny mpamorona azy, Dolfi dia manala ny loto amin'ny alàlan'ny rafitra fitarafana ary mampiasa angovo 80 heny noho ny milina fanasan-damba mahazatra.
Mila mametraka ny akanjo anaty rano fotsiny isika, tsy mihoatra ny 2 kg, detergent kely ary ilay fitaovana Dolfi. Afaka 30-40 minitra eo ho eo dia hadio ny fitafiantsika.
Detergent, ny antony fahatelo manakiana amin'ny fanasan-damba
Raha mametraka detergent bebe kokoa amin'ny milina fanasan-damba isika, dia tsy vitan'ny hoe mahomby manana olana ny milina, fa manao koa izahay a fahasimbana tsy ilaina sy tsy misy ilana azy amin'ny tontolo iainana.
Raha manana doka detergent be loatra ianao, dia hitranga aminao ny iray amin'ireto:
Fofona mahery rehefa manokatra ny milina fanasan-damba.
Toa somary matavy ny akanjo na mahatsiaro ho henjana rehefa voahosotra.
Voamarikao ny fijery tasy kely teo am-baravaran'ny amponga.
Matetika maloto foana isaky ny manasa tsirairay ny vatasarihana mpamonjy voina, misy ny sisa tavela.
Ny fanontaniana lehibe dia ny ohatrinona ny detergent apetrakaNa izany aza, tsy misy fatra marina satria miankina amin'ny detergent, ny milina fanasan-damba, ny mpanamboatra, ny taonan'ny masinina, sns.
Na izany aza, manazava ny manam-pahaizana:
“Amin'ny ankapobeny, amin'ny toe-javatra mahazatra, ny doka 50 milimetatra fanasan-dronono dia ampy hanasana lamba 4,5 kg.
Zava-dehibe koa ny tsy hamenoana ny milina fanasan-damba amin'ny akanjo mba tsy ho triatra. Na ny tsingerina poakaty, fa aza asiana lanjany mihoatra ny voalaza.
Na izany na tsy izany, raha toa ahy ianao, mitandrema amin'ny zavatra ataoko mba hikarakarana ny tontolo iainana, ireto safidy hanasana lamba ireto dia ho mora ampiasaina:
Mividiana detergent biolojika tanteraka, hialana amin'ny zavatra simika.
Omano ny detergent an-tranontsika manokana miaraka amin'ny savony savony Marseille, menaka manitra mba hanimboloan'ny akanjo araka izay ilainay sy soda vera iray vera. Tsy afaka adiny iray dia afaka manomana sy mampiasa azy mandritra ny volana maro isika. Vahaolana ara-toekarena sy ara-tontolo iainana!
Soloy vinaingitra paoma sy menaka manitra ilaina ilay mpanalefaka lamba. Ny vinaingitra dia tsy ampiasaina hiakanjo salady fotsiny fa manana hery lehibe hanalefaka ny lamba koa.
Mampiasà savony voajanahary, ireo mandritra ny androm-piainany.
Aza mampiasa boka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Teknolojia vaovao » Masinina fanasana ara-tontolo iainana sy tolo-kevitra hanaja ny tontolo iainana